W तरीकाहरू जुन एआई ईमेल मार्केटि Revolution क्रान्तिकारी गर्दैछ Martech Zone
बिहीबार, मे 28, 2020 बिहीबार, मे 28, 2020 Douglas Karr
एक हप्ता वा सो भन्दा अघि, मैले कसरी साझेदारी गरे बिक्री बल आईन्स्टाइन नाटकीय रूपमा ग्राहक यात्रा परिवर्तन गर्दै थियो, भविष्यवाणी गरीरहेको थियो र निजीकृत संचार प्रदान गरीरहेछ जसले प्रभाव बढाउँदै छ र सेल्सफोर्स र मार्केटि। क्लाउड ग्राहकहरूको लागि मंथन घटाउँदैछ।
यदि तपाईंले हेर्नु भएको छैन भने तपाईंको ग्राहक सूची प्रतिधारण हालसालै, तपाई आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ कि कति ग्राहकहरु निरन्तर आधारमा मंथन गर्दै छन्। त्यहाँ उत्तम उत्पादनहरूको लागि त्यहाँ विकल्पहरूको धेरै छन्, त्यसैले उपभोक्ताहरू क्र्यापको लागि वरिपरि टाँसिएका छैनन् ब्याच र ब्लास्ट ईमेल न्यूजलेटरहरू अब। उनीहरूको ईनबक्समा प्रत्येक सन्देश प्रासंगिक, समयमा र बहुमूल्य हुने आशा गर्दछ ... वा अन्यथा तिनीहरू छोड्दैछन्।
प्रासंगिक, समयमा र बहुमूल्य बन्नको लागि तपाईले तपाईको ईमेल डेलिभरीसन, फिल्टर, व्यक्तिगतकरण र अनुकूलन गर्न पर्ने हुन्छ। सहि टूलसेटहरूबिना यो असम्भव छ ... तर धन्यबाद कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मार्केटर्सको जीवन क्षमता विकास गर्न, श्वास अभियानहरू चलाउँदैछ जुन मेशिन शिक्षाको साथ आफैंलाई अनुकूलन गर्न जारी राख्दछ।
यसले मार्केटर्सलाई सन्देशहरू पठाउनको लागि सक्षम गर्न गइरहेको छ एक गतिमा उनीहरूको ग्राहकहरू सहजै छन्, सामग्रीका साथ जुन दुबै व्यक्तिगतकृत र संलग्न छन्।
ईमेल मार्केटिंगमा एआई क्रान्ति
विश्वभरिका companies०% कम्पनीहरूले २०२० मा कम्तिमा एक बिक्री प्रक्रियामा एआई प्रयोग गर्ने छ। २०30 सम्ममा एआईले १ revenue ट्रिलियन अतिरिक्त राजस्व चलाउने छ र नाफामा 2020 2035% वृद्धि हुनेछ!
वास्तवमा, mar१% ईमेल विपणकहरूले दावी गर्छन् कि उनीहरू आउने डाटा रणनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यहाँ ways तर तरीकाहरू छन् जुन कृत्रिम बुद्धिको राम्रो परिणामको लागि ईमेल मार्केटिंगमा प्रभाव पार्दैछ।
विभाजन र Hyperpersonalization - पूर्वानुमानित स्कोरिंग र दर्शकहरूको चयनले ग्राहकहरूको भावी व्यवहारको अनुमान गर्न एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्दछ र सामग्रीलाई वास्तविक-समयमा प्रदर्शन गर्नको लागि फाइन-ट्यून गर्दछ।
विषय लाइन अनुकूलन - एआईले विषय लाइनहरू सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ जुन सम्भवतः पाठकसँग गुंज्याउन सक्छ, ईमेल खोल्नको लागि धकेल्दै। यो एक आकर्षक विषय लाइन मस्यौदा जब आउँछ परीक्षण र त्रुटि को अनिश्चितता हटाउँछ।
ईमेल retargeting - जबकि केही ग्राहकहरु त्याग पछि तुरुन्त पठाइएको तपाईंको त्याग ईमेलमा जवाफ दिन सक्छ, अरूले एक हप्ताको लागि खरीद गर्न तयार नहुन सक्छन्। एआई यी ग्राहकहरु बीच भिन्नता र एक अनुकूलन समय मा तपाइँको retargeting ईमेल पठाउन मद्दत गर्दछ, महत्वपूर्ण कार्ट त्याग दर कम
स्वचालित पठाउने समय अनुकूलन (STO) - एआईको सहयोगमा, ब्रान्डहरूले अन्ततः मार्केटिंग ट्राइड पूरा गर्न सक्दछ - सही सन्देश सही व्यक्तिमा सही समयमा पुग्ने क्रममा। धेरै प्रोमोशनल ईमेलहरू कष्टप्रद छैनन्? एआई ले ग्राहकहरूको गतिविधिहरूको विश्लेषण गरेर पठाउन समय क्यालिब्रेट गर्न मद्दत गर्दछ, जसले तिनीहरूको समय प्राथमिकता चित्रण गर्दछ।
एआई स्वचालन - एआई केवल स्वचालन मात्र होइन। ब्रान्ड र खरीदहरूसँग ग्राहकको विगतको अन्तर्क्रियालाई विचार गर्दै बढी सान्दर्भिक स्वचालित ईमेलहरू पठाउन मद्दतको लागि यसले एक कदम अगाडि जान्छ।
उत्तम र सजिलो च्यानल अप्टिमाइजेसन - ग्राहकका बानीहरू, प्राथमिकताहरू, र विगतका र भविष्यवाणी गरिएका व्यवहारहरूको विश्लेषण गर्दा, एआईले निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ कि उनीहरू ईमेल, पुश सूचना, वा कुनै अन्य च्यानलका साथ अझ राम्ररी गुन्जाउँछन्। यसले उपयुक्त च्यानलमा सन्देश पठाउँदछ।
स्वचालित परीक्षण - A / B परीक्षण, पहिले दुई-आयामिक प्रक्रिया अब एक ओम्निचेनेल हाइपर-लक्ष्यीकरण मोडेलमा ट्रान्ससेन्ड भएको छ। तपाईं विभिन्न क्रमबद्ध र संयोजनमा धेरै चलहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै प्रणालीहरूले नमूना बाहिर पठाउँछन्, सांख्यिकीय रूपमा मान्य परिणाममा पुग्न, र बाँकी ग्राहकहरूलाई अनुकूलित प्रतिलिपि पठाउनुहोस्।
यहाँ प्रत्येक तरीकाले विस्तृत वर्णनको साथ पूर्ण इन्फोग्राफिक छ कि एआईले ईमेल मार्केटिंगमा क्रान्तिकारीकरण गर्दैछ।
टैग: aiAi स्वचालनस्वचालित पठाउन समय अनुकूलनच्यानल अनुकूलनवाणिज्य क्लाउड आइन्स्टाइनhyperpersonalizationनिजीकरणविभाजन